April 26, 2021 - ApannPyay Media
သင့်ကို အသက် (7) နှစ်လောက်ပိုငယ်သွားစေမယ့် ဂျပန်ရိုးရာအနှိပ်လေ့ကျင့်ခန်း (7) ခု
April 26, 2021 by ApannPyay Media
သင့်ကို အသက် (7) နှစ်လောက်ပိုငယ်သွားစေမယ့် ဂျပန်ရိုးရာအနှိပ်လေ့ကျင့်ခန်း (7) ခု အသက်အရွယ်ရလာရင်မျက်နှာရဲ့အရေပြားကတွဲကျပါတယ်ဒါကမျက်နှာကကြွက်သားတွေအားနည်းလာတာသာမကပဲကိုလာဂျင်ဓာတ်လျော့ကျလာလို့လဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်ကြီးခြင်းရဲ့နောက်တချက်ကတော့ မျက်နှာကအရိုးတွေရွေ့ကုန်လို့ပါပဲ။ အကျိုးဆက်ကတော့မျက်နှာကေ ဝဝါးလာပြီးပါးနဲ့မေးစေ့တွေလျော့တွဲလာတာပါ။ဒါပေမယ့်ဂျပန်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ချီယော့ဟယရှီကဒီပြဿနာကိုရှင်းဖို့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မျက်နှာမှာရှိတဲ့သွေးတစ်ရှူးတွေလည်ပတ်ဖို့နဲ့ဦးခေါင်းခွံကအရိုးတွေပုံမှန်အတိုင်းရှိစေဖို့ကူညီမယ့်အထူးနှိပ်နည်းကိုသိခဲ့ပါတယ်။ထိုစနစ်ကိုခိုရုဂိလို့ခေါ်ပါတယ်။ Bright Sideကထိုနှိပ်နည်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ မျှဝေပေးဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့အတွက်ခေါင်းစဉ်ရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့အပိုဆုလေးကိုအလွတ်မခံနဲ့နော်။ အရေးကြီးတဲ့မှတ်စု! ကြွက်သားတွေကနှစ်ကြာတာနဲ့အမျှလျော့လာပြီးအဆီတွေပြန့်နှံလာပါတယ်။ငယ်ရွယ်တုန်းမှာတော့အလွှာတခုတည်းဖြစ်အောင်အဆီတွေကပေါင်းသွားပေမယ့်အသက်ရလာရင်တော့တနေရာတည်းမှာစုပုံသွားပါတယ်။သင်စမလုပ်ခင်မှာမှန်ကိုယူပြီးအနှိပ်ဆီလေးလိမ်းပါ။ အဲဒါကသင်လုပ်နေတာမှန်ရဲ့လားဆိုတာသိစေပြီးအပိုပွတ်တိုက်မှုတွေကိုရှောင်ပေးပါတယ်။ပြီးတော့သင့်အရေပြားကိုလဲသန့်စင်သင့်ပါတယ်။ဒီနှိပ်နည်းကိုတော့ မျက်နာမှာဒဏ်ရာရှိသူ နာတာရှည်ရောဂါသည်နဲ့သွေးဖြူဆဲလ်မူမမှန်သူတွေစတဲ့ ENT ရောဂါရှိသူတွေမလုပ်သင့်ပါဘူး။သင့်မျက်နှာကိုနာကျင်မှုမရှိစေဘဲစပ်စပ်လေးဖိနှိပ်ရမှာပါ။ခိုရုဂိနှိပ်နည်းကမျက်နှာအလေးချိန်ကိုကျစေပါတယ်။ ၁။ပါးကိုမြှင့်ခြင်း သင့်တံတောင်ဆစ်ကိုစားပွဲပေါ်တင်ပါ။လက်သီးဆုပ်ပါ။မျက်နှာမှပါးရိုးတွေကိုလျှော့ထားပါ။သင့်ကြွက်သားတွေပြေလျော့နေအောင်ပေါ့။ထိုအနေအထားအတိုင်း၅စက္ကန့်နေပါ။ ၂။နဖူးကိုလုပ်ခြင်း သင့်ခေါင်းကိုနောက်သို့အနည်းငယ်ကွေးပါ။လက်သီးဆုပ်ပါ။သင့်လက်ခလယ်ဖြင့်နဖူးကိုဖိပါ။လက်ကိုအပေါ်သို့ဆက်သွားပြီးဆံပင်မှာနား ထိရောက်သည်အထိဆွဲပါ။ထို့နောက်လက်ချောင်းများကိုညှပ်ရိုးထိရောက်အောင်လည်ပင်းမှဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့ပါ။ ၄။နဖူးကိုချောအောင်လုပ်ခြင်း လက်သီးဆုပ်ပါ။ သင့်လက်သီးအလယ်ဖြင့်မျက်ခုံးမှဖြည်းဖြည်းချင်းဆံပင်နားရောက်တဲ့အထိပွတ်ဆွဲပါ။ အခုအရင်အနေထားအတိုင်းလက်ကိုပြန်ထားပါပြီးလျှင်နောက်တခေါက်အပေါ်သို့ပြန်ဆွဲပါ။ဒီလိုနဲ့နဖူးကချောမွတ်လာမှာပါ။ ၅။မျက်လုံးကိုအပေါ်သို့ဖွင့်ခြင်း လက်သီးဆုတ်ပါ။ မျက်ခုံးကိုပင့်ပါ။လက်ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်ရဲ့အကူအညီဖြင့်မျက်ခုံးတလျောက်ကိုလက်ဖြင့်တွဲပါ။ ၆။မျက်နှာ၏အောက်ပိုင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း လက်ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်ကိုဖိ၍လက်သီးဆုပ်ပါ(လက်ဆစ်ကိုကွေးထားပါ)ထိုလက်နှစ်ချောင်း၏အကူအညီဖြင့်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလုပ်ပါ။မေးစေ့မှဆီသို့ အားပါပါဖိဆွဲပါ။.ပါးစပ်ထောင့်နားနေရာမှစပါ။ဖိတဲ့နေရာနဲ့ဆွဲတဲ့နေရာကြားကအကွာအဝေးနည်းပါစေ။စုစုပေါင်း ရ ခေါက် ၈ခေါက်လောက်ပြန်လုပ်ပါ။ ၇။နှိပ်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်ခြင်း ဆုပ်ထားတဲ့လက်ကိုဖြည်ပါ။သင့်လက်ချောင်းကိုနဖူးပေါ်တင်ပြီးညင်သာစွာဘေးကိုဆွဲပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့သင့်လက်ချောင်းတွေကိုပါးမှစ၍ညှပ်ရိုးတလျှောက်လည်ပင်းအထိဆွဲချပါ။ဒီနှိပ်ခြင်းကိုတပတ်တခါပုံမှန်လုပ်ပေးပါ။သတင်းကောင်းကတော့ နှိပ်ခြင်းရဲ့အဓိကရလဒ်အပြင်တခြားကောင်းကျိုးအများကြီးကိုပေးပါတယ်။မောပန်းမှုတွေမျက်ကွင်းညိုတာတွေကိုပျောက်စေပြီးမျက်နာကိုပိုတောက်စေပါတယ်။အသားအရည်ကပိုပျော့လာတဲ့အတွက်မျက်ကွင်းတွေလျော့ပြီးလျော့တွဲနေတဲ့ အရေပြားကိုချောမွတ်ပြီးတငိးရင်းစေမှာပါ။်မျက်နှာတခုလုံးကိုပိုပြီးတိတိကျကျလုပ်ပေးပြီးသွယ်အောင်လုပ်ပါ။ပိုကောင်းတဲ့သွေးလည်ပတ်မှုကအသားအရေကိုရစေပါတယ်။ Writer –Min Thu ( XYZ NEWS ) သင့္ကို အသက္ (7) ႏွစ္ေလာက္ပိုငယ္သြားေစမယ့္ ဂ်ပန္႐ိုးရာအႏွိပ္ေလ့က်င့္ခန္း … Read more
ခရမ်းချဉ်သီးက ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပ
ခရမ်းချဉ်သီးက ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပ ပါးနုသွေး၊ နီမြန်းစေချင်ရင် တချို့ပျိုလေးတွေရဲ့ ပါးလေးတွေဟာ နီးမြန်းပြီး နှင်းဆီရောင် သမ်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ချင်ရင် ခရမ်းချဉ်သီးကို များများစားပေးပါ။ ပါးပြင်ကို ပန်းနုရောင် သမ်းရုံမျှမက အသားရည်ကို ရွှန်းစိုဝင်းလဲ့စေပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးကို ဒီအတိုင်း စားပေးရင် ပါးပြင် ပန်းနုရောင်သန်းရုံမျှမက မျက်လုံး၊ သွား၊ အရည်ပြားတွေပါ ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ မျက်နှာသန့်စင်စေချင်ရင် အိပ်ရာမဝင်ခင်နဲ့ အိပ်ရာထပြီး ဆယ်ငါးမိနစ်၊ စုစုပေါင်း တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀ လောက် အချိန်ပေးရင် ရပါပြီ။ အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ မျက်နှာကို ခရမ်းချဉ်သီးတစ်ဝက်နဲ့ (တစ်လုံးကို လှီးပြီး) မျက်နှာကို ပွတ်သပ်ပေးပါ။ လည်ပင်းတစ်ဝိုက်နေရာတွေကိုပါ ပွတ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ဆယ်ငါးမိနစ်ခန့်ထားပြီး ရေနဲ့ ပြန်ဆေးပေးပါ။ မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ် လုပ်ပေးပါ။ … Read more
၁ လအတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် ၁၁ ပေါင်လောက်ကျမယ့် ဒိန်ချဉ်နဲ့ တခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုရောထားတဲ့ ကျန်းမာတဲ့မနက်စာ ၁ လအတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် ၁၁ ပေါင်လောက်ကျမယ့် ဒိန်ချဉ်နဲ့ တခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုရောထားတဲ့ မနက်စာ အဟာရလမ်းညွှန်သူတွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရ မနက်စာဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ အညီညွတ်ဆုံး ဖြစ်ဖို့လိုအပ်သလို အရသာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အခုပြောပြမယ့် မနက်စာကတော့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်မှာဖြစ်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို တည်ငြိမ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသားအရေကို စိုပြေစေပြီး ဆံသားကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းက အဆိပ်အတောင့်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အပြင် ဝမ်းမှန်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆီနဲ့ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုကို အားပေးပါတယ်။ အခုပြောပြမယ့် အစားအစာကို ရက်ပေါင်း ၃၀ လောက်ပုံမှန်စားသုံးပေးရင် ကိုယ်အလေးချိန် ၃ ပေါင်ကနေ ၁၁ ပေါင်ထိ … Read more
ဆံပင်တွေတဖြေးဖြေးနဲ့ပါးလာအောင် သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်မိနေတဲ့ အမှားများ
ဆံပင်တွေတဖြေးဖြေးနဲ့ပါးလာအောင် သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်မိနေတဲ့ အမှားများ ဆံပင်တွေက အရင်ထက်ပိုပြီး တဖြေးဖြေးနဲ့ ပါးလာတာမျိုးကို ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ ဆံပင်ပါးလာပြီဆိုရင် ထိပ်တွေပြောင်လာတာ၊ ဆံပင်တွေ ကွက်ကျွတ်တာမျိုးတွေ အရမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ယောင်္ကျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ရဆိုးစေတာမို့ ဆံပင်တွေ တဖြေးဖြေးနဲ့ပါးလာအောင် သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်မိနေတဲ့ အမှားတွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကိုယ်လုပ်မိနေတဲ့ အရာတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်တတ်တာမို့ သတိထားပြီး ဆင်ခြင်လို့ရအောင် ဘာတွေက မလုပ်သင့်ဘူးလဲဆိုတာကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက် ခဏခဏထိတာ၊ အပြင်သွားရင် နေပူထဲ ထီးမဆောင်း၊ ဦးထုပ်မဆောင်းပဲ သွားတာတွေက ဆံသား အရမ်းထိခိုက်ပျက်စီး စေပါတယ်။ ဆံပင်တွေ တဖြေးဖြေးကျွတ်ပြီး ပါးလာစေပါတယ်။ တစ်ချိန်လုံး ဆံပင်ကို တင်းကျပ်နေအောင် စုစည်းထားတာ၊ တင်းကျပ်နေအောင် ကျစ်ဆံမြီးတွေကျစ်တာမျိုးက ဆံပင်အရင်းကနေကိုကျွတ်ပြီး ဆံပင်ပါးစေပါတယ်။ ထိပ်ပြောင်စေပါတယ်။ ဆံပင်အဖျားတွေ၊ … Read more
အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်များ မသုံးစွဲဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းများ
အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်များ မသုံးစွဲဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းများ အလှကုန်ပစ္စည်းတိုင်းက အသားအရေအလှအပကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ ထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အလှကုန်ပစ္စည်းတိုင်းက မိမိအသားအရေနဲ့ မတည့်တာကြောင့် သေချာရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒီများပြားလှတဲ့ အလှကုန်တွေထဲကမှ အရေပြားဆရာဝန်တွေက မသုံးစွဲဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်။ ဘော်ဒီလိုးရှင်းနဲ့ လက်အတွက်လိုးရှင်းများ လိုးရှင်းတွေမှာ ရေဓာတ်ပါဝင်မှုများစွားပါဝင်ပြီးတော့ အသားအရေမခြောက်ဖို့အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုးရှင်းထက်စာရင် ခရင်မ်တွေက အသားထဲပိုစိမ့်ဝင်နိုင်တာကြောင့် ခရင်မ်များကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Sunscreen စပရေးများ စပရေးများကိုဖြန်းတဲ့အခါ အရေပြားပေါ်မရောက်ဘဲ သူ့ရဲ့အာနိသင်ကပြယ်သွားတဲ့အပြင် အသားထဲထိစိမ့်မဝင်နိုင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ နေရာင်ကာခရင်မ်လိုမျိုး ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကို မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ ခြေထောက်ပေါင်းတင်ဆေးများ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်များက ခြေထောက်ပေါင်းတင်ဆေးများသုံးစွဲဖို့ကိုလည်း အားမပေးပါဘူး။ ခြေထောက်ပေါင်းတင်ဆေးများအစား ခရင်မ်များကိုသာ အသုံးပြုပေးခြင်းအားဖြင့် ခြေဖနောင့်အသားမာတက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးပြီး ခြေဖဝါးလေးများကို နူးညံ့စေပါတယ်။ အမဲရောင် မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေး အမဲရောင်မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေးများက အသားအရေကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပြီး အရေပြားတည်ဆောက်မှုကို … Read more
ကြက်ဥ အကာ အသုံးပြုနည်း လျှို့ဝှက်ချက်
ကြက်ဥ အကာ အသုံးပြုနည်း လျှို့ဝှက်ချက် အဆီအရမ်းပြန်နေရင်… အဆီတွေ အရမ်းပြန်တတ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရဲ့ အလှကို ဖျက်စီးတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒီမျက်နှာပေါ်က အဆီတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူဖြေရှင်းလို့ ရပါတယ်။ အမြုပ်ထအောင် လုပ်ထားတဲ့ ကြက်ဥအကာထဲကို အုတ်ဂျူံ နဲ့ရောပြီးတော့ မျက်နှာပေါ်မှာ mask လိုမျိုးလေး လိမ်း ပြီးတော့ မိနစ်အနဲငယ်ထားပြီး ရေအေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ 4/ မျက်အိပ်တွေ ရောင်နေခဲ့ရင်… တချို့တွေက မျက်အိပ်ရောင်နေ လို့ ဆိုပြီး ပစည်းတွေကို စျေးတွေ အများကြီး ပေးပြီး ဝယ်သုံးကြတာ ကို တွေ့ကြရပါတယ်။ တကယ်တော့ အိမ်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူရတာကို သူတို့ သတိမထားမိလို့ပါ။ ငွေလဲ မကုန်ဘူး၊ လုပ်ရတာလဲ လွယ်တယ်…. စတဲ့ အားသာချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ကြက်ဥအကာကို … Read more
အဲကွန်းမသုံးပဲ အပူဒဏ် အံတုရန် နည်းလမ်းတွေ အဲကွန်းမသုံးပဲ အပူဒဏ် အံတုရန် နည်းလမ်းများ (၁) အုပ်ကြွပ်မိုးပါ အုပ်ကြွပ်ဟာအပူချိန် ၁၃၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်အထိခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အ တွက်မီးလောင်ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ်။အိမ်တွင်းအအေးဓာတ်ကိုထိန်းပေးပြီး နေပူဒဏ်ကိုလည်းသွပ်ထပ်များစွာ ခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ် ။ (၂) အပူခံဂွမ်း RadiantBarrier သုံးပါ အပူခံဂွမ်းလို့လူသိများပြီး စက်ရုံတွေမှာ သုံးတာတွေ့ရပါတယ် ။မျက်နှာကျက် အပေါ်မှာတပ်ဆင်ရတဲ့ insulationmateri al ဖြစ်ပြီးအုပ်ကြွပ်နဲ့ တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအပူဒဏ်သက်သာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ Y0utube မှာတင်ထားတဲ့ video တွေအရသွပ်မိုးပြီး Radiant Barrier သုံးထားတာတောင်အပူချိန် ၇ ဒီဂရီလောက် လျော့ကျသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနှစ်ချက်ဟာ initial cost လို့ခေါ်တဲ့ ကနဦးကုန်ကျငွေ များပေမယ့် running cost တော်တော်သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲကွန်းသုံးမယ်ဆိုကနဦး ကုန်ကျငွေရော၊လစဉ်ကုန်ကျငွေအပြင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်ပါထည့်ပေါင်းတွက်ရမှာ … Read more
မျက်နှာပေါ်က နေလောင်ကွက်များနှင့် အမဲစက်၊ မှဲ့ခြောက် များ ၂ပတ်အတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းလိုလျှင် မျက်နှာပေါ်က_အမဲစက်_အမာရွတ်_မှဲ့ခြောက်_နေလောင်ကွက်များ၂ပတ်အတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းမည့် ဆေးနည်း အမဲစက်မှဲ့ခြောက်နေလောင်ကွက်သက်သာပျောက်ကင်းတဲ့နည်းလေးပါ။ လက်တွေ့စမ်းသပ်ကာလ ၂ပတ်အတွင်း အတော်သက်သာလို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။ အားလူးကို သနပ်ခါးသွေးသလိုသွေးပြီး…မျက်နှာသစ်ပြီးလိမ်းပါ။ တစောင်းလက်ပတ်ရှိကထည့်သွေးပါ။ မရှိလဲ အာလူးနဲ့ ရေနဲ့ သွေးလိမ်းပါ။ ခြောက်မှ မျက်နှာထပ်သစ်ပြီး Cream တခုခုလိမ်းပေးပါ။ လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးမှ ဒီပို့စ်ကို တင်လိုက်ပါသည်။ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလေးပါ။ (အာလူးပါးပါးကပ်လဲရသည်။ ခဏခဏ ကွာကျ၍ ဒီနည်းသုံးသည်။) အမဲစက်များ တဖြည်းဖြည်းပါလာပြီး ပန်းရောင်အနေထားသို့ ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မည်။ ဆက်လိမ်းပေးပါ။ သွေးပြီးရင် ကျောက်ပြင်ပေါ် ပုံအပါအတိုင်း မှောက်ထားပါ။ မဲမသွားရန်။ ကျောက်ပြင်သီးသန့် မထားနိုင်ပါက ကြွေပန်းကန်ပြားလေးထဲ မှောက်ထားပေးပါ။ တညလုံး လိမ်းမအိပ်ပါနှင့်။ တင်းလွန်းလျှင် မျက်နှာအသားနုသည့်အတွက် အသားကွဲနိုင်ပါသည်။ လိမ်းပြီး ခြောက်သွားလျှင် မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ … Read more
မျက်နှာပေါ်မှာ အမာရွတ်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရလျှင်
မျက်နှာပေါ်မှာ အမာရွတ်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရလျှင် မျက်နှာပေါ်မှာ အမာရွတ်တွေရှိနေရင် စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ဝက်ခြံဆိုတာကတော့ အရွယ်ရောက်တဲ့ လူငယ်တိုင်း အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရတာပါ။ ဝက်ခြံဖြစ်ပြီးလို့ ဝက်ခြံပျောက်သွားရင် အမာရွတ်ကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ခဏခဏ ထိတာ၊ ညစ်ပေးတာတွေကြောင့် လည်းတစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဝက်ခြံဖြစ်ရင် မျက်နှာကိုသေချာသစ်ပေးမယ်။ လက်ကိုလည်း သေချာဆေးမယ်။ ပြီးရင် သွားတိုက်ဆေး (သို့) ရေခဲနဲ့ ခဏဝက်ခြံကို အုံထား ဖိထားပေးမယ်ဆိုရင် ဝက်ခြံသက်သာပါတယ်။ အခုတော့ ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမာရွတ်တွေကို ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးသွားမယ်နော်။ ရှားစောင်းလက်ပပ် ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အမာရွတ်တွေကို ထိထိရောက်ရောက်ပျောက်ကင်းစေဖို့ ရှားစောင်းလက်ပပ်မှာ ဗီတာမင် ဓာတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး အမာရွတ်တွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ရှာားစောင်းလက်ပပ်အနှစ်ကို မျက်နှာပေါ်မှာ ပုံမှန်လိမ်းပေးရင် အမာရွတ်သက်သာပါတယ်။ အာလူး အာလူးကို ပါးပါးလှီးပြီး မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကို ကပ်ပေးပါ။ … Read more
အရွယ်တင်နုပျိုချင်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း သိကိုသိထားရမယ့် အလှအပလျှို့ဝှက်ချက်(၃)ခု မိန်းကလေးတိုင်း မလှချင်တဲ့သူ၊ မနုပျိုချင်တဲ့သူ မရှိပါဘူး။ မိန်းကလေးဆိုတာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာလည်း အရေးအကြောင်းကင်းစင်ပြီး အရွယ်တင်နုပျို လှပတဲ့သူ၊ အမြဲတမ်းလှပနေတဲ့သူ ဖြစ်ချင်ကြပါတယ် …။ အသက်ကြီးလာတဲ့အထိ နုပျိုလှပဖို့အတွက် မိန်းကလေးတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားရမယ့် အလှအပဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) ကိုယ်တိုင်လုပ် အရေးအကြောင်းကင်းခရင်မ် vaselline စားပွဲတင်ဇွန်းနှစ်ဇွန်းကို အပူပေးပြီး သံလွင်ဆီတစ်ဇွန်း၊ ကြက်ဥအနှစ်တစ်လုံး၊ ပျားရည်တစ်ဇွန်း၊ ထောပတ်သီးအမှည့်တစ်လုံးတို့ကို အနှစ်ဖြစ်အောင် ရောမွှေလိုက်ပါ။ မျက်နှာကိုပြောင်စင်အောင်သစ်ပြီး ရလာတဲ့အနှစ်ကို မျက်နာအနှံ့ခပ်ထူထူလေးလိမ်းကာ မိနစ်၂၀ လောက်ထားပေးပါ။ ပြီးရင် ရေကြက်သီးနွေးလေးနဲ့မျက်နှာသစ်ပေးပါ …။ တစ်ပတ် နှစ်ကြိမ်လောက် ပြုလုပ်ပေးရင် မျက်နှာပေါ်မှာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အရေးအကြောင်းတွေမဖြစ်လာအောင် တားဆီးပေးနိုင်တာကြောင့် အသက်ကြီးလာလည်း ရွယ်တူတွေထက် နုပျိုနေစေပါလိမ့်မယ် …။ (၂) ကိုယ်တိုင်လုပ် … Read more